Nepal Dayari | शिव पार्वतीको दर्शन गरी पुरा पढ्नुहोस् तपाईको परिवारमा सुख शान्ति मिल्नेछ ।
फागुण ११, २०७८ बुधबार १७७ पटक हेरिएको
धन लाभ हुनु अगाडि मिल्छ यस्तो सङ्केत, वेवास्ता नगरी ॐ ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस्, धन लाभ हुनेछ ॐ जय लक्ष्मी माता !!ॐॐॐॐॐॐ ॐॐॐॐॐॐॐॐ २ दिन भित्र धन लाभ हुनेछ ॐ जय लक्ष्मी माता !!हिन्दू धर्मशास्त्रमा शुभ र अशुभ विषय बारे उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ ।
अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यस्ता कुराहरुमा विश्वास नगर्नेको संख्या उल्लेख्य छ तर केहीले भने यस्ता कुरुालाई सही मान्छ जिवनमा । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् । त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिने मान्यता रहेको छ ।
विहीबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने पनि शुभ संकेत मान्नुहोस् तपाईलाई धन लाभ हुन सक्छ । यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ । यस लेखमा, हामी तपाईंलाई सफलता प्राप्त गर्ने तरिकाहरू बताइरहेका छौं। हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छ, जसरी एक व्यापारी व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छन्।